I-Mollymook Sandy Studio - I-Airbnb
I-Mollymook Sandy Studio
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Karen
Ukuhambahamba imizuzu engu-2 ukuya e-North Molly social hub kanye namasevisi (ukudla, i- deli, inhlanzi& ama-chips kanye ne-Pizza takeaway, utshwala, ikhemikhali, ukudla endaweni yokudlela yase-Gwylo ne-Banisters Rooftop bar).
Ukuhambahamba imizuzu engu-5 ukuya e-North Mollymook evikelwe, elinye lamabhishi amahle kakhulu ase-South Coast. Ivikelwe ngabagadi bempilo phakathi nezinyanga zasehlobo.
Umzila oyisicaba no-breezy ngasolwandle ukuya endaweni enobungane bemindeni, inkundla ye-basketball, indawo yokuzivocavoca yangaphandle, amathilomu engeziwe kanye ne-Mollymook Golf Club.
I-studio esikhanyayo ne-Breezy sibekwe ohlangothini oluphakeme lomgwaqo obheke eMpumalanga futhi sibambe ukupholisa kwaseningizimu
Okuqukethe wena okunamakamelo angu-2. Ikamelo eliyinhloko likhulu futhi livulekile futhi liqukethe ikhishi lesimanjemanje, indawo yokuhlala ene-TV nendawo yokudlela. Ikamelo lesibili lixhunyiwe futhi liqukethe ishawa evulekile nomshini wokuwasha
I-studio (igalaji eliguquliwe) ixhunywe endlini yethu futhi inomnyango oxhumanisa abantu ababili ozovalwa unomphela kusuka ezinhlangothini zombili phakathi nokuhlala kwakho ukuze ube nobumfihlo obuphelele. Akuhlukanisiwe nokho ngakho kungenzeka kube nomsindo ovamile wasendlini ongahlunga
Igceke elincane elineshawa lokugeza sonke isihlabathi ngemva kosuku ogwini
Konke ongakufuna eholidini lakho lasebhishi kuphakathi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo
Ngaphandle kwalokho amagquma aluhlaza okwesibhakabhaka kanye nedolobha elinomlando wase-Milton liyimizuzu engu-5 yokushayela imoto. Thola iqoqo lezitolo ze-boutique eziyingqayizivele zokubhrawuza bese umisa isidlo sasemini kwenye yamathilomu amaningi ahlukahlukene nezindawo zokudlela, kuhlanganise ne-Pilgrims Vegetarian Cafe eyaziwayo
Noma iya e-Ulladulla bese uhambahamba ezitolo eziningi noma itheku elihle lokudoba.
4.95 · 182 okushiwo abanye
Eduze nebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya ezitolo ze-Mollymook, i-Gwylo eatery ne-Bannisters rooftop bar Imperilion.
Ukuhamba ngezinyawo okuya e-Rick Stein @ Bannisters ngasolwandle
Ukuhambahamba okumnandi okuya ebhishi yase-Narrawallee nase-inlet
Ngokuvamile ngizoba khona ukukubingelela lapho ufika futhi ngikubonise indawo futhi ngiphendule noma yimiphi imibuzo. Ngitholakala kukho konke ukuhlala kwakho ukusiza nganoma yini engingayenza ngesikhathi esifanayo ukuhlonipha indawo yakho nobumfihlo.
Ngokuvamile ngizoba khona ukukubingelela lapho ufika futhi ngikubonise indawo futhi ngiphendule noma yimiphi imibuzo. Ngitholakala kukho konke ukuhlala kwakho ukusiza nganoma yini…
Inombolo yepholisi: PID-STRA-2345